Sivivinye amacala kazibuthe we-XVIDA nezinsiza ze-iPhone | Izindaba ze-IPhone
Sivivinye amacala kazibuthe weXVIDA nezinsiza ze-iPhone
ULuis Padilla | | Izesekeli ze-IPhone, eziningana
Ukufika kweMagSafe wenze izesekeli kazibuthe ze-iPhone yethu imfashini, kepha kukhona abakhiqizi abanjengoXVIDA abebelokhu besinikeza le mikhiqizo esihlaziya ngayo kule ndatshana isikhathi eside.
IMagSafe wuhlelo olusha lwamagnetic lokubopha i-Apple eyengeze ku-iPhone 12 entsha, kufaka phakathi izesekeli ezahlukahlukene (amacala, amashaja, abaphathi bamakhadi ...) lokho sebenzisa amandla kazibuthe ukuzinamathisela kwi-iPhone yakho, ekhombise ukuthi ilula kakhulu futhi iyasebenziseka. Kepha kuthiwani uma singenayo i-iPhone 12? Noma uma singafuni ukukhokha izintengo ezivame ukucelwa izesekeli ezisemthethweni noma eziqinisekisiwe? Yebo, sinezinye izixazululo ezifana nalezo ezinikezwa yi-XVIDA.
Amacala we-Silicone noma we-TPU nganoma iyiphi imodeli ye-iPhone, ukuze noma ngubani akwazi ukusebenzisa izesekeli zikazibuthe lo mkhiqizo uqobo onazo, futhi ezihambayo kusuka kumashaja ezimoto, amashaja wedeskithophu ngisho nebhethri eliphathekayo lokho kuzokhishwa kungekudala futhi lokho kuzonamathiselwa ku-iPhone yakho kuphela uma uyidinga.
Icala leMagnetic TPU le-iPhone 11 Pro Max
Imiklamo yezembozo zayo igxile ekutholeni ukuvikeleka okuhle ngaphandle kokwenza i-iPhone yethu ibe mkhulu kakhulu. Izinto zokwakha ezinhle, ukuqeda okuhle nokubamba okuhle yizona zinto ezijwayelekile zazo zonke izembozo zaso, ngasinye esinokuthinta okuhlukile okwehlukanisa phakathi kokunye. Isibonelo, ikesi le-iPhone 11 linezimbobo zekhamera engemuva, lishiya ingilazi yemodyuli yekhamera imboziwe.. Icala le-silicone le-iPhone 11 Pro Max linomklamo onemiphetho eyindilinga ebukeka iyinhle ngempela nge-iPhone yethu, kanye nemibala egqamile njengoba ubona esithombeni.
Ikesi le-Magnetic silicone le-iPhone 11 Pro Max
Futhi icala le-TPU le-iPhone 12 Pro Max linezinhlangothi eziqondile, njengoba kumakwe ukwakhiwa kwe-iPhone uqobo, ngephethini kuyo yonke ingxenye yangaphandle eqinisekisa ukubanjwa okuhle kwe-smartphone necala, futhi izinkinobho zokubukeka kwensimbi zigqanyiswa yi-chrome. Zonke izembozo zivikela i-iPhone yakho ku-360º yayo, imboza izipikha nemibhobho, isixhumi sombani, ikhamera, njll.
Icala leMagnetic TPU le-iPhone 12 Pro Max
Futhi yini lawa mazibuthe afakwa kuwo wonke amakhava? Ukusebenzisa izesekeli ze-XVIDA. Ukukhombisa ukuthi isebenza kanjani, sinesiphathi seshaja nemoto, isesekeli esisebenzayo esenza ukugqoka nokususa i-iPhone kube lula kakhulu. ngenkathi uyigcina ishaje ngamandla we-7,5W. Ibhokisi lifaka phakathi ishaja yesilayidi sogwayi esinezixhumi ezimbili ze-USB kanye ne-USB kwikhebula le-USB-C, elenziwe ngenayiloni eboshiwe, imininingwane emibili eyaziswa futhi engajwayelekile uma uthenga lolu hlobo lwezesekeli.
XVIDA Magnetic Car Ishaja Umnikazi
Ukwesekwa kweshaja kulungiswe kahle kakhulu ngenxa yokuxhaswa kwe-rack okubandakanya futhi okuvimbela isisindo se-iPhone ekuyibambeni. Icacisiwe, ingabekwa ngokuvundlile noma ngokuvundlile, futhi inelogo yomkhiqizo weXVIDA ngaphambili ekhanyisa okuluhlaza uma ixhunyiwe. Ngaphezu kwazo zonke izindlela zokuphepha ezifanele, ishaja ifaka nefeni eqeda ukushisa okungenziwa.
1 Umbono woMhleli
Ngemuva kokuhlola iMagSafe ku-iPhone 12 Pro Max, ukusebenzisa izesekeli kazibuthe kulula impela, kepha okwamanje kukhawulelwe kumodeli yakamuva ye-iPhone. I-XVIDA isinikeza ithuba lokusebenzisa lolu hlelo lokubopha ngamakhava nezesekeli zazo zonke izinhlobo, noma ngabe imodeli yethu ye-iPhone. Vele, izesekeli kazibuthe ziyahambisana nezembozo zazo, akuyona uhlelo "olujwayelekile". Izinga eliphakeme lezinto zokwakha, ukuqeda okuhle, ukuvikelwa okuhle kanye nohlelo lokubopha oluvikelekile nolunethezekile, ngamanani akhanga kakhulu.. Ungabona yonke imikhiqizo yabo kuwebhusayithi yabo esemthethweni (isixhumanisi) futhi uma ufaka i-oda usebenzisa ikhodi I-ACTUALIDAD_XVIDA20 uzothola isaphulelo esingu-20%.
Amakhava wemiklamo ehlukene nezinto zokwakha
Ukubamba okuphephile kwamagnetic
Ishaja yemoto enazo zonke izesekeli ezidingekayo
Kuvumeleke izinhlobo ezahlukahlukene ze-iPhone
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Izesekeli ze-IPhone » Sivivinye amacala kazibuthe weXVIDA nezinsiza ze-iPhone
Ingabe i-iPad Pro inesibonakhulu esifihliwe? Kubukeka sengathi kunjalo
I-Apple Podcasts Ibambezela Ukwethulwa Kokubhaliselwe KuJuni